Manao ahoana ny fahasamihafana ao Afghanistan? Ny mahazo ireo Sikh sy Haindò · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2018 5:48 GMT
Vakio amin'ny teny Español, ਪੰਜਾਬੀ, Ελληνικά, Français, русский, Italiano, 日本語, English
Sikh Afghan, mamelona fivarotana iray ao Kabul. Avy amin'i koldo hormaza avy any madrid, españa. CC 2.0.
Raha misy ny fanafihana naneho ny halalin'ny tsy filaminana ao Afghanistan, dia ny fanafihana tamin'ny alalan'ny fanaovana vivery ny ainy tamin'ny volana jolay izay nahafatesan'olona 19 sy naharatràna 10 raha teny an-dalana hamonjy fihaonana amin'ny Filoha Ashraf Ghani ny solontenan'ny Sikh sy ny Haindò.
Fanonganam-panjakana iny ho an'ny vondrona ISIS izay nilaza ho tompon'antoka tamin'ity fandarohana baomba tamin'ny alalan'ny fanaovana vivery ny ainy nitranga tao an-tanànan'i Jalalabad ity. Tsy hoe vitan'ny vondrona ihany ny nanangana vanja mipoaka mahafaty any amin'ny faritra tokony efa voaaro amin'ny fahatongavan'ny filoha Ashraf Ghani, fa vitan-dry zareo ihany koa ny namono nahafaty izay saika solontena Sikh voalohany indrindra mba tafiditra ao amin'ny lapan'ny antenimiera ao amin'ny parlemanta antsoina hoe Awtar Singh Khalsa. Maty tamin'izany fanafihana izany ihany koa i Rawail Singh, Sikh mpikatroka malaza.
Saripika tao amin'ny Eliatroz.com ary nahazoana alalana.
Sikh sy Haindò miisa 17 no maty tamin'izany fanafihana izany. Tamin'izany, maro tamin'ireo mpiseraseran'ny media sosialy no nanoritsotitra izany ho fanafihana ny fahasamihafana izay ankamamian-dry zareo fa ankahalain'ny ISIS kosa.
Tsy hitako intsony izay tokony holazaina hanehoako ny fahatafintohinako sy ny alaheloko amin'ny famoizana ireo Afghan tia tanindrazana indrindra ao Jalalabad ireo – ny kely indrindra azoko lazaina: Fanafihana atao amin'ny fitiavan-tanindrazana Afghan, fahalalaham-pivavahana, fahasamihafana, demaokrasia, finamanana sy fifampizarana soatoavina Indo-Afghan izao toe-javatra izao.
Samy feon'ny Sikh rtao Afghanistan i Rawail Singh sy i Avtarsingh. Niteraka fahabangana ny namonoana azy ireo niaraka tamin'ny Sikh 17 hafa nandritra ny fanafihan'ny ISIS an'i Jalalabad. Manantena fa hiverina ao Afghanistan ny fandriampahalemana.
Mamariparitra ny lalampanorenana Afghan fa tsy maintsy Miozolomana ny Filohan'i Afghanistan. Fa manohana ny fandraisana anjara ara-politika ny Sikh ny lalam-pifidianana, arivo mahery eo ho eo ny isan'ny Sikh ao Afghanistan, ary ny Haindò kosa dia am-polony monja sisa tavela.
Araka ny fanitsiana ny lalam-pifidianana tamin'ny taona 2016, dia natokana ho an'ny solontenan'ny vondrom-piarahamonina Haindò na Sikh ny toerana iray amin'ny 249 ao amin'ny antenimieram-pirenena. Nihazona ny toerany tany amin'ny senà hatramin'ny taona 2010 kosa, taorian'ny diy hitsivolana navoakan'ny filoha teo aloha Hamid Karzai ilay mpikatroka ho amin'ny zon'ny vehivavy Anarkali Honaryar, ary nisongadina ho feo matanjaka avy amin'ny vitsy an'isa.
Awtar Singh Khalsa no tokony ho solontena voalohany avy amin'ny vondrom-piarahamonina toa ao amin'ny antenimiera raha tsy maty tamin'ny fanafihana. Ankehitriny dia ny zananilahy Narinder Singh Khalsa no handray ny toerany taorian'ny fangatahana avy amin'ny vondrom-piarahamonina, amin'ny fahafantarana fa lasibatra ihany koa izy.
Misandratra avy amin'ny fiarahamonina
Raha mihoatra ny 300 ny isan'ny fianakaviana Haindò sy Sikh monina ao Afghanistan amin'izao fotoana izao, dia zerô kosa ny isan'ny Sikh sy ny Haindò miditra any amin'ny fampianarana ambony.
Rawail Singh sy ny zananivavy Komal, pejy Facebook an'i Rawail Singh.
Manatsahatra ny fianarany eny amin'ny ambaratonga antenantenany ny Sikh sy ny Haindò vokatry ny fampijaliana na fandrahonana (avy amin'ny mpampianatra sy avy amin'ny mpiara-mianatra) sy vokatry ny tsindry ara-toekarena.
Fikarohana iray avy amin'ny Vaomieran'i Etazonia misahana ny Fahalalahana ara-pivavahana iraisampirenena nivoaka tamin'ny taona 2009 no nampiseho fa sakanana mihitsy ny Sikh sy ny Haindò tsy hahazo toerana ao amin'ny governementa ary miatrika fanavakavahana ara-tsosialy goavana ihany koa ry zareo ireo.
Maro no nifindra nankany Kabul rehefa nifindra toerana nandritra ny fifandonana nitranga tany amin'ny faritanin'i Kandahar sy Helmand. Matetika ry zareo no mivarotra enta-madinika.
Lahatahiry iray nivoaka tamin'ny taona 2016 no nanolo-kevitra fa nandao ny firenena ny 99%-n'ny Sikh sy Haindò tao Afghanistan tao anatin'ny telopolo taona farany.
Raha iverenana ny tany amin'ny 1980 tany ho any, raha nihoatra ny 220.000 ny isan-dry zareo, dia afa-nitady asa tany amin'ny sehatry ny politika sy nanana anjara toerana goavana teo amin'ny fiarahamonina. Mandresy lahatra ny manampahaizana avy amin'ny vondrom-piarahamonina Sikh sy Haindòfa ao amin'ny firenena ravan'ny ady, dia Afghan maro no manadino ny anjara asa nahazatra ny vondrom-piarahamonin-dry zareo.
Narahina fihetsiketseham-panoheran'ny Sikh tao New Dehli ny fanafihana tamin'ny 2 jolay, ary nanatevin-daharana ny mpanao fihetsiketsehana ihany koa ny ambasadaoron'i Afghanistan ao India, ny Dr. Shaida Abdali.
Saingy taorian'ny herisetra, maro tamin'ireo sisa tavela tamin'ny Sikh tao Afghanistan no mahita ny hoavin-dry zareo ao amin'ity firenena mpiray sisintany amin-dry zareo izay ananany fifamatorana ara-kolontsaina sy ara-pivavahana kokoa ity. Fianakaviana Sikh miisa 25 no voalaza fa nanao fangatahana hizaka zom-pirenena Indiana avy hatrany taorian'ny daroka baomba.
Maro ireo Afghan naneho ny alahelony mahita ireo mpiray tanindrazana aminy mandao ny firenena:
Tena feno alahelo! tsy azoko veroka ny alahelon-dry zareo sy ny hirifiriny raha mandao ny firenena, indrindra fa ny fianakaviana Avtar Singh izay mbola vao haingana ny ratra nahazo azy ireo! tsy maintsy manao izay hahatonga ity firenena ity ho azo antoka ho an'ny rehetra isika na inona na inona finoany sy vondrona ara-poko misy azy. Raha tsy izany [dia ho lasa daholo ny rehetra!]
Fa ho an'ireo Sikhs sy Haindò sisa tavela, ny fitiavan-tanindrazana sy ny fahatsapam-piarahamonina nasalotr'i Rawail Singh sy Awtar Singh Khalsa no antony voalohany mbola ijanonana ao Afghanistan.
Mila mijery indray ny fomba fiasanao ianao Atoa Filoha Ashraf Ghani noho ny famoizanay ny tena tia tanindrazana Afghan indrindra indrindra, Rawail Singh. Matoky aho fa tsaroanao ilay zazavavy hita amin'ny sary, ny masony no niambina ny renivohitrao tsy ho tratran'ny kolikoly. Ankehitriny ny masony no hanontany anao hoe lasa aiza ny Babany?